ဒါကမင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်အိမ်တွေကတကယ့်ဘဝမှာဘယ်လောက်ကုန်ကျမလဲ - သတင်း
အဆင့် - ဤသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်ကားများမှအိမ်များသည်မည်မျှကုန်ကျမည်ကိုသတ်မှတ်ထားသည်
ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်အိမ်များသည်အမြဲတမ်းတော်တော်လေးငြူစူသည်။ ဇာတ်ကောင်များသည်အလွန်ခက်ခဲသောအလုပ်များ၊ ကြီးမားသည့်မိသားစုများနှင့်အချိန်သိပ်မများကြသော်လည်းသူတို့၏အိမ်များကိုအစဉ်မပြတ်ကောင်းမွန်စွာအလှဆင်ထားပြီးမင်္ဂလာရှိသောအိပ်မက်နှင့်တူသည်။
Raffle လူတိုင်းအကြိုက်ဆုံးခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်များတွင်အိမ်များအတွက်ပျမ်းမျှအိမ်ဈေးနှုန်းကိုသုတေသနပြုခဲ့သည်။ ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်တိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောဈေးအကြီးဆုံးအိမ်များထဲမှစျေးအသက်သာဆုံးမှအဆုံးအထိအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
အမှန်တကယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိ Natalie ၏မိဘများ၏အိမ် - ပေါင် ၇၀၆,၄၀၇ (ဒေါ်လာ ၉၂၈,၅၆၀)
Natalie ကသူမသည် Wandsworth ၏ရှုပ်ထွေးသောအဆုံးတွင်နေထိုင်သည်ဆိုသော်လည်းအိမ်သည်ပေါင် ၇၀၀ ကျပ်ကျသည်။
၁၀။ Mark's Love in အိမ်ကတကယ်တော့ပေါင် ၇၈၈,၈၅၀ ($ 1,036,930)
Mark သည် Southwark ရှိအနုပညာဂိုဒေါင်ပြောင်းလဲသည့်တိုက်ခန်းတွင်နေထိုင်သည်။ လှပသောပုံစံမျိုးပိုင်ဆိုင်မှုသည်ပေါင် ၇၈၈ ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိသည်။
၉။ Iris ၏အိမ်တော်အားလပ်ရက် - ပေါင် ၉၉၄,၂၁၄ ($ 1,306,878)
အမဲန်ဒါအားလပ်ရက်၌သို့လှုံ့ဆျောရှိ Iris '' အိမ်, Surrey, ဗြိတိန်၌တည်ရှိ၏။ Rosehill Cottage ဟုခေါ်သောချစ်စရာကောင်းသောကျောက်တုံးအိမ်သည်ပေါင် ၁ သန်းနှင့်အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းသည် ထုံးစံရုပ်ရှင်များအတွက်တည်ဆောက်ခဲ့သည် !
၈) Santa Clause တွင်ရှိသော Scott ၏အိမ် - £ 1,521,510 ($ 2,000,000)
The Santa Clause ရှိ Divorcee Scott Calvin ၏အိမ်ကိုအီလီနွိုက်ပြည်နယ် Lakeside တွင်သတ်မှတ်သည်။ အိမ်ကပေါင် ၁.၅ သန်းတန်တယ်။ Ngl, ငါအဲဒီမှာခရစ္စမတ်သုံးစွဲဖို့ကိုချစ်ချင်ပါတယ်။
7. တစ်အိမ်တည်းရှိ McCallister အိမ် - £ 1,582,859 ($ 2,080,643)
McCallister ၏အိမ်သည်အမှန်တကယ်စျေးအလယ်အလတ်တန်းစားရှိသည့်အတွက်သင်အံ့အားသင့်သွားနိုင်သည်။ enviable house သည်ချီကာဂိုဆင်ခြေဖုံး Winnetka တွင်တည်ရှိပြီးပေါင် ၁.၅ သန်းတန်သည်။
၆။ ဂျူလီယက်နှင့်ပေတရု၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိအိမ်၏အိမ် - ပေါင် ၂,၀၀၁,၉၄၅ ($ 2,631,523)
Mark သည် Juliet ကိုချစ်မြတ်နိုးကြောင်း ၀ န်ချတောင်းပန်သည်။ ပေါင် ၂ သန်းကျော်လောက်တန်တယ်။
၅။ National Lampoon ရှိ Griswold Residence - ပေါင် ၂,၁၁၆,၅၇၂ (ဒေါ်လာ ၂,၇၈၂,၂၀၀)
အဆိုပါ Griswold ရဲ့အခြားတော်တော်ငြူစူသောသူတို့သည်အမေရိကန်ခရစ်စမတ်အိမ်ရှိသည်။ ချီကာဂို၌တည်ရှိသည့်ခမ်းနားသောအိမ်သည်ပေါင် ၂ ဒသမ ၂ သန်းတန်သည်။
အမှန်တကယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိဂျေမီ၏အိမ် - ပေါင် ၂,၆၅၀,၆၂၇ ($ 3,484,205)
စာရေးဆရာ Jamie သည်အနောက်လန်ဒန်ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်များတွင်နေထိုင်သည်။ သူဟာပြင်သစ်ကိုမထွက်ခွာမီသူ့အစ်ကိုနဲ့သူ့ရည်းစားကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့သူ့£ 2.6million house မှာရောက်နေပြီ။
Holmes Chapel ပြည့်စုံသောကျောင်း Harry စတိုင်များ
အဆိုပါအားလပ်ရက်အတွက် 3. အမန်ဒါရဲ့အိမ် - £ 7,694,594 ($ 10,114,418)
အဆိုပါအားလပ်ရက်အတွက်အမန်ဒါ L.A. အတွက်မြေထဲပင်လယ်အိမ်ကြီးတွင်နေထိုင်သည်အတွင်းပိုင်းတော်တော်လေးမယုံနိုင်စရာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့£ 7.6million တန်ဖိုးရှိရဲ့အံ့သြစရာအများကြီးမဟုတ်ပါဘူး။
Home Alone2ရှိ ၂ ယောက်ဖြစ်သော Rob McCallister ၏နယူးယောက်မြို့အိမ်ရာ - £ 7,903,555 ($ 10,389,095)
ထိပ်ဆုံးနေရာကိုရောက်နေတာက New Home အိမ်ဖြစ်ပြီးဒုတိယ Home Alone ရုပ်ရှင်မှာပြသထားတယ်။ ရော့ McCallister ၏အိမ်တော်ကိုပထမ ဦး ဆုံးရုပ်ရှင်ထဲတွင်အိမ်သူအိမ်သားထက်£ 6million ကျော်£ 8million နီးပါးတန်ဖိုးရှိသည်။
၁။ Elf ရှိ Walter Hobbs ၏တိုက်ခန်း - £ 19,000,000 ($ 25,000,000)
စျေးအကြီးဆုံးခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်အိမ်များ၏ဇယားကွက်ကိုထိပ်ဖျားသည် Elf ရှိ Hobbs ၏ဆိုးရွားသောတိုက်ခန်းဖြစ်သည်။ Buddy စက္ကူနှင်းဖုံးတွင်စကိတ်မှအောက်ခြေအထိဖုံးအုပ်ထားသည့်တိုက်ခန်းသည်ကြီးမားသောပေါင် ၁၉ သန်းတန်သည်ကိုသိရ။ သင်အံ့အားသင့်သွားပါလိမ့်မည်။ Walter Hobbs သည်နယူးယောက်ခ်၏အဓိကနေရာဖြစ်သော Central Park West (၅၅) တွင်နေထိုင်သည်။
• ဒီရိုးရှင်းတဲ့ဉာဏ်စမ်းပဟေိကိုယူပြီး Netflix ခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်ကိုမင်းကြည့်ရှု့မယ်